GQ Property Management repair reporting
पासवर्ड प्राप्त होस्
हाम्रो मरम्मत रिपोर्टिङ प्रणालीमा स्वागत छ। यदि तपाईंसँग आकस्मिक घण्टा बाहिर छ भने, कृपया हाम्रो 24 घण्टा प्रतिक्रिया टोलीमा कल गर्नुहोस्: 0333 567 0970
1 समस्या के हो?
कृपया सम्बन्धित तस्वीर मा क्लिक गर्नुहोस्
आफ्नो समस्या सकेसम्म चाँडै संग सम्हाल्न छ भनेर प्रभावित उपकरण लागि सकेसम्म विवरण को धेरै हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्। कृपया उपकरण प्रकार बनाउन, मोडेल र सिरियल नम्बर (यदि सम्भव छ भने) समावेश गर्नुहोस्। कृपया पनि समस्या को एक रूपरेखा प्रदान गर्न र कुनै पनि चेतावनी रोशनी वा असामान्य ध्वनि वर्णन।
बतीका बल्बहरु: कृपया बिग्रिएका उपकरण(हरु)को बारे र समस्या के हो भनेर विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्नुहोस् । उदाहरण: बल्बको प्रकार र साइज, स्क्रुवाला ढक्कन/बेयोनेटवाला ढक्कन, मानक, कम्प्याक्ट, LED, हेलोजेन आदि ।
बार: कृपया समस्याको सकेसम्म विस्तृत रुपमा व्याख्या गर्नुहोस् । काठले बनेका हैन भने बार कुन सामग्रीले बनेका हुन् भनेर उल्लेख गर्नुहोस् । कृपया बारको फोटोहरु पनि अपलोड गर्नुहोस् ।
जुनजुन बिग्रिएका छन् तिनीहरुको संख्या र (सम्भव भए) तिनीहरुको साइज उल्लेख गर्नुहोस् र तिनीहरुको तस्वीरहरु अपलोड गर्नुहोस् । अन्य पनि सान्दर्भिक विवरण छन् भने यस खण्डमा समावेश गर्नुहोला ।
कृपया सन्दर्भ द्वारा लिक को हदसम्म व्याख्या: (क) एक कन्टेनर आवश्यक छ कति ठूलो र कन्टेनर एक कप हरेक घण्टा वा एक कप हरेक दिन जस्तै खाली गर्न कति छ; र (ख) कि लिक स्थिर वा अनिरंतर छ। कृपया लीक छ कि वस्तु बारे सकेसम्म धेरै विवरण हामीलाई प्रदान गर्नुहोस्।
कृपया सकेसम्म धेरै विस्तार समस्या व्याख्या र जो कम्युनल क्षेत्र (हरू) को विवरण प्रदान समस्या पहिलो देख्यो थियो, प्रभावित र कसरी बारम्बार समस्या छ छन्।
कृपया सकेसम्म धेरै विवरण दिने, सल्लाह के आवश्यक छ।
उपकरणको प्रकार (आवश्यक)
उपकरणमा सीढीहरूको उडानहरूको संख्या
बल्ब को प्रकार (जस्तै मानक वा एलईडी)
बल्ब को आकार (जस्तै मानक वा संकुचित)
बल्ब फिटिंग (जस्तै screwcap वा bayonette)
प्रभावित बल्बहरुको संख्या
बार विवरण (जस्तै काठको वा तारको)
चुवाहटको लागि कति ठुलो भाडोको आवश्यकता छ? (जस्तै कप वा बाल्टिन)
यसलाई तपाईले कतिको अन्तरालमा खालि गर्नुहुन्छ? (जस्तै प्रतिघण्टा वा दैनिक)
चुवाहट निरन्तर छ कि अनिरंतर छ?
कुन क्षेत्र (हरू) प्रभावित?
समस्या पहिलो पटक कहिले देखा परेको थियो?
समस्या कतिको बारम्बार छ?
घाटा विवरण *
कृपया स्पष्ट दोष को स्थान राज्य। उदाहरणका लागि एक छत प्रकाश 'पश्चिम भाग, फ्लैट 23 आसन्न दोस्रो तल्ला को हलवे' मा काम गर्न छोड्यो हुन सक्छ। कृपया मुद्दाको बारेमा सकेसम्म धेरै उपयोगी जानकारी समावेश कृपया तपाईं ठाउँ लिन सेवा, (यदि लागू) तपाईं, यो के गर्न चाहनुहुन्छ कसरी बारम्बार र आवश्यक सेवा बारे कुनै पनि अन्य जानकारी चाहनुहुन्छ जब सल्लाह
अगाडी बढ्न एउटा तस्वीरमा क्लिक गर्नुहोस् कृपया माथि एक विकल्प चयन गर्नुहोस् सान्दर्भिक टिप्पणीहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्
2 फोटो थप्नुहोस्
समस्याको व्याख्या गर्न मद्दत गर्नको लागि कृपया5फोटोहरू, भिडियो वा अडियो फाईलहरू (अधिकतम: 30mb प्रत्येक) थप्नुहोस्।
3 ठेगाना विवरण
के यो तपाईंको निजी सम्पति हो?
I am an owner and occupier of the property
I amatenant paying rent
I amaleaseholder of the property who resides elsewhere
Who manages the repairs for the property?
4 तपाईंको सम्पर्क विवरणहरु
सूचक किरायादार छैन
यो मुद्दा रिपोर्टिङ व्यवसायी बिना उठाइनेछ।
टेलिफोन नम्बर (वैकल्पिक)
5 पुष्टि गर्नुहोस् र पठाउनुहोस्
*जस्तै पार्किंग प्रतिबन्ध वा वैन लागि सीमित पहुँच
के यो घर-सम्पत्तिमा असुरक्षित बहालकर्ता छ?
म नियम र सर्तहरुसँग सहमत छु
मेरो विवरण अर्को पटक सम्झनुहोस्
मुद्दा पेश गर्नुहोस्
घर-सम्पत्ति ओगट्ने असुरक्षित मान्छे
नियम र सर्तहरू (अंग्रेजी मात्र)
के तपाईँ निश्चित हुनुहुन्छ?
कृपया पुष्टि गर्नुहोस् कि तपाई यो मुद्दा उठाउन चाहानुहुन्छ।
बन्द पुष्टि गर्नुहोस्
रद्द गर्नुहोस् जारी होस्
भाषा चयन गर्नुहोस्
यो Fixflo वेबसाइट भाषा अनुवाद सेवाले Microsoft API सदुपयोग गर्छ।
हामीले सही अनुवाद प्रदान गर्न व्यावहारिक प्रयास गरेका छौं तर कुनै स्वचालित वा कम्प्यूटरीकृत अनुवाद पूर्ण हुँदैन र मानव वा परम्परागत अनुवाद विधिहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि अभिप्रेरित छैन।
आधिकारिक मुललेख Fixflo वेबसाइटको अंग्रेजी संस्करण हो। अनुवादमा कुनै पनि फर्क वा मतभेद सिर्जना भएमा बाध्यकारी छैनन् र अनुपालन वा प्रवर्तन उद्देश्यका लागि कुनै कानुनी प्रभाव छैन ।
यदि वेबसाइटको अनुवादिय संस्करणमा सुचनाको शुद्धता सम्बन्धि कुनै प्रश्न उठेमा कृपया वेबसाइटको अंग्रेजी संस्करणमा उल्लेख गर्नुहोला, जुन आधिकारिक संस्करण हो।
GQ Property Management - मरम्मत व्यवस्थापन सफ्टवेयर द्वारा संचालित छ
काम हुँदै छ ...